765 Kushicilelwe ngu umphathi Nov-13-2020
Le yimboni yethu, etholakala eHuian Chengnan Industrial District, eQuanzhou, idolobha elisogwini eFujian, eChina, elijabulela idumela elithi "Idolobha lezikhwama namacala".
Izikhwama zaseHongsheng zasungulwa ngonyaka we-1993. Le nkampani ekuqaleni yayihileleke emabhizinisini okuhweba ahlobene nokuthekelisa, futhi isikhathi esithile yahlukaniswa kancane kancane yaba ukwakhiwa kwemikhiqizo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, kanye nokuphathwa kokuthengwa kwezinsizakalo okuhlinzeka amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba.
Sihlala sinamathela kwisisekelo se- "Good Faith, Quality, Scientific Management", futhi siphikelela ku- "Quality First". Zibophezele ekubeni ibhizinisi eliholayo embonini, ukudala umkhiqizo oqinile wasekhaya nowakwamanye amazwe.